ကမ္ဘာပျက် ဟောကိန်းပါ ကောလာဟလ စာရွက်များ ရန်ကုန်လူထုကြား ပျံ့နှံ့ . | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကမ္ဘာပျက် ဟောကိန်းပါ ကောလာဟလ စာရွက်များ ရန်ကုန်လူထုကြား ပျံ့နှံ့ .
ကမ္ဘာပျက် ဟောကိန်းပါ ကောလာဟလ စာရွက်များ ရန်ကုန်လူထုကြား ပျံ့နှံ့ .
Posted by မမေလး on May 4, 2011 in Copy/Paste, Myanma News | 20 comments
ကမၻာပ်က္ ေဟာကိန္းပါ ေကာလာဟလ စာရြက္မ်ား ရန္ကုန္လူထုၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ .
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မတ်လအကြား ကာလ အတွင်း နေနှင့်ကမ္ဘာကြား ဂြိုဟ် ကြီးတစ်လုံး ဖြတ်သန်းမှုကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပြင်းထန်သောသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် များ ဖြစ်ပေါ်ကာ လူသန်း ၄ဝဝဝ ခန့် သေကျေပျက်စီး နိုင်သည်ဟုပါဝင်သောသတိပေးစာရွက် များမှာ ရန်ကုန်မြို့နေ ပြည်သူလူထု အကြားပျံ့နှံ့လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါစာရွက်အား ကမ္ဘာတစ် ဝန်းရင်ဆိုင်နေရသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များကို ကျော်လွှား နိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာစောင့်နတ်၊ သာသနာ စောင့်နတ်များမှ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လွှာ ဟု အမည်ပေး ထားပြီးအမည် မသိသောလူအချို့မှ လိုက်လံဖြန့်ဝေ နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစာရွက်တွင် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လလယ်လောက်မှစတင်၍ စစ် ကိုင်း၊ တောင်ငူနှင့်ပဲခူးမြို့များတွင် ငလျင်များစတင်လှုပ်ရှားလာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာပြည်ကြီး အန္တရာယ်မှကင်းဝေး စေရန် ဆရာ တော်သံဃာတော်များမှ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက် လေယာဉ်ဖြင့်ပဋ္ဌာန်း၊ ပရိတ်နှင့်မေတ္တသုတ် ပရိတ်တော်များ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ပါက ၂ဝ ပုံ ၁ ပုံခန့်သာ အန္တရာယ် ကျရောက်စေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ အပြင် ၂ဝ၁၁ ခု ဧပြီလအတွင်း မြောင်းမြ၊ ပုသိမ်၊ ဖျာပုံစသော မြို့များ၌ မထင်မှတ်ဘဲ ရေကြီးနိုင်သည့်အပြင် ၂ဝ၁၂ ဒီဇင်ဘာမှ ၂ဝ၁၃ မတ်လအထိ နေနှင့်ကမ္ဘာ ကြားသို့ဂြိုဟ်ကြီးတစ်လုံး ဖြတ်သန်း မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုဂြိုဟ်ကြီးသည် အပူရှိန်ပြင်းထန်လွန်းသောကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်၌ ငလျင်လှုပ်ခတ်ခြင်း၊ မီးတောင်များ ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် ပြင်း ထန်သောသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် များဖြစ်ပွားကာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူဦးရေ သန်းပေါင်း ၆ဝဝဝ အနက်သန်း ၄ဝဝဝ ခန့်မှာသေကျေပျက်စီးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊၁၅၊၁၆ ရက်နေ့များ ၌ ကမ္ဘာကြီးလည်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းကာ အမှောင်ကျမည် ဖြစ်သည့်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာများအား ကြိုတင်စုဆောင်းထားရန်နှင့် အဆောက် အအုံ များအားခိုင်ခံ့စွာတည်ဆောက်ထား ရန်လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။ ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှ သံဃာတော်တစ်ပါးက ”ဦးဇင်းတို့ဆီလည်း ဒီစာရွက်တွေ ဘယ်လိုကဘယ်လို ရောက်လာမှန်းမသိရောက်လာတယ်။ ဒီစာရွက် တွေရဲ့သဘောက လူတွေ ကို အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြန့်တာလား၊ ဘာသာတရား ပိုမိုကိုင်းရှိုင်းစေရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖြန့်နေတာလားဆိုတာ တော့သေချာ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဟောကြားခဲ့တဲ့ ကျမ်းဂန်တွေအရဆိုရင်တော့ ဘုရားငါးဆူပွင့်ပြီးမှပဲ ကမ္ဘာပျက်တယ်။ အခုက အရိမေတ္တယျ ဘုရားတစ်ဆူပွင့်ဖို့ ကျန်သေးတဲ့ အတွက် အခုချိန်မှာ ကမ္ဘာပျက်ဖို့ဆိုတာက လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး”ဟုမိန့်ကြားသည်။ မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင်က မာယာလူမျိုးများ၏ တွက်ချက်မှုအရ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာကြီးမီးလောင်ပျက်စီးခြင်း၊ ရေ လွှမ်းမိုးခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ကာ လူသန်း ပေါင်းများစွာ သေကျေပျက်စီးမည့် အပြင်ကမ္ဘာကြီး လည်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်း သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာသည်နောက် မှရှေ့သို့ ပြောင်းပြန်လည်ပတ်မည် ဖြစ်ကာ နေသည်လည်းအနောက် မှထွက်၍အရှေ့မှပြန်ဝင်မည်ဟု ဆို ရိုးစကားများရှိခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် သိပ္ပံပညာရှင်အများစုမှာ မာယာလူ မျိုးများ၏ ပြောကြားချက်နှင့်ဆိုရိုး စကားများကို ယနေ့အထိထောက်ခံ မှုမရှိကြောင်း၊ သို့ရာတွင်သိပ္ပံပညာ ရှင်များ၏ ယူဆချက်အရ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် စကြဝဠာအတွင်းနဂါးငွေ့ တန်းအားကမ္ဘာအပါအဝင် ဂြိုဟ်ကြီး ကိုးလုံးမှဖြတ်သန်းမှုကြောင့် ဂြိုဟ် များအပေါ်တွင် ဒြပ်ဆွဲအားများတိုး လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် နေအပေါ်တွင် ဒြပ်ဆွဲအားများတိုး လာမှုကြောင့် နေမှရောင်ခြည်များ ပိုမို ထွက်ရှိလာမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ကမ္ဘာပေါ်၌လည်း ဒြပ်ဆွဲအားတိုး လာမှုကြောင့် ကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာ များတုန်ခါမှုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊နေမှ ရောင်ခြည်များ ပိုမိုထုတ်လွှင့်မှု ကြောင့် ကမ္ဘာသည် ပိုမိုပူနွေးလာ မည့်အပြင် ကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာများ တုန်ခါမှုကြောင့် မြေငလျင်ဒဏ်များ ပိုမိုဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ မြေငလျင်လှုပ်ခတ်သော နေရာသည်ပင်လယ်အောက် ကြမ်း ပြင်ဖြစ်ခဲ့ပါက ဆူနာမီရေလှိုင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ကမ္ဘာ့ သံလိုက်စက်ကွင်းများနေရာပြောင်းရွှေ့ ကာဖရိုဖရဲဖြစ်မှုကြောင့်ကမ္ဘာ့တောင်၊ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းများတွင် အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိလာကာကမ္ဘာ့သံလိုက် စက်ကွင်းသည် တစ်ချိန်ချိန်၌ သုည ဒီဂရီဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းပြောသည်။ ဆက်လက်၍ ”ကမ္ဘာ့သံလိုက် စက်ကွင်းတွေ သုညဒီဂရီဖြစ်သွားရင် ကမ္ဘာ့ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု လုပ်ငန်းတွေပျက်စီးမယ်။ နေရောင်ခြည် ထဲမှာပါလာတဲ့ စွမ်းအားမြင့်ရောင်ခြည် တွေကို သံလိုက်စက်ကွင်းတွေက မကာကွယ်နိုင်တော့တဲ့အတွက် ကမ္ဘာပေါ်ရှိတဲ့ လူသားတွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။ ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ စွမ်းအားမြင့်နေရောင်ခြည်ဒဏ် ကြောင့် အရေပြားကင်ဆာတို့၊ မျက်စိအမြင်လွှာပျက်စီးတာတို့၊ ကလေးလုံးဝမရနိုင်တော့တဲ့ ရောဂါတွေရလာနိုင်တယ်။ ဒါတွေကတော့ သိပ္ပံသဘောအရဖြစ် လာနိုင်ဖွယ်ရှိပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးပျက် သွားမယ်လို့တော့ ဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကမှ လက်မခံသလိုကျွန်တော် လည်းလက်မခံဘူး။ အခုစာရွက်တွေထဲမှာ ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးတော့ မယ့်ပုံစံမျိုးရေးသား ဖော်ပြဖြန့် ဝေ နေတာကြောင့် ပြည်သူတွေအကြားမှာတော့ ထိတ်လန့်မှုတွေတော့ရှိ မှာပဲ။ ဒီစာရွက်တွေကို ဘယ်လိုသဘောနဲ့ လိုက်ဖြန့်ဝေနေတယ် ဆိုတာကိုတော့ မပြောတတ်ဘူး” ဟုဆို သည်။
အင်းနော်…အဲ့စာရွက်တွေတော့…မြို့ထဲဘက်မှာ ဝေတယ်လို့တော့..မကြားသလိုပဲ။မြင်ကိုမမြင်လိုက်တာပါ။အခုလိုပြောပြလို့လည်း ကျေးဇူးပါနော်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လလယ်လောက်မှစတင်၍ စစ် ကိုင်း၊ တောင်ငူနှင့်ပဲခူးမြို့များတွင် ငလျင်များစတင်လှုပ်ရှားလာမည် ဖြစ်ကြောင်း
၂ဝ၁၁ ခု ဧပြီလအတွင်း မြောင်းမြ၊ ပုသိမ်၊ ဖျာပုံစသော မြို့များ၌ မထင်မှတ်ဘဲ ရေကြီးနိုင်သည့်အပြင်
မူရင်းအီးမေးလ်စာက .. အင်တာနက်တလောကလုံးရောက်နေတော့တာပါ..။
ထွက်ရပ်ဂေါက်…ခပ်ကြောင်ကြောင်လူတွေက.. နာမယ်ကြီး..လူနာမယ်..ဘုန်းကြီးနာမယ်သုံးပြီးလုပ်တယ် ပြောကြတယ်..။
စုံစမ်းရသလောက်.. မြစိမ်းရောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာကလည်း…
ဦးဝင်းမောင် မှ မြစိမ်းရောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးသို့ ၂၆-၂-၂၀၁၁ နံနက် ၉း၁ဝအချိန်လျှောက်ထားချက်— ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော်အား ကမ္ဘာစောင့်နတ်၊သာသနာစောင့်နတ်များမှလာရောက်နှိုးဆော်တိုင်တွန်းမှုကြောင့်ဆရာတော်အားလာရောက်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘုရား။ ၂၀၁၁ ခု… မတ်လလယ်လောက်မှစ၍ ငလျင်များစတင် လှုပ်ရှားမှာဖြစ်ကြောင်းအဓိက အနေနှင့် စစ်ကိုင်း၊တောင်ငူ၊ပဲခူး စသည့်မြို့များဖြစ်ကြောင်း၊တန်ခိုးကြီးဘုရားစေတီများ မပျက်စီးစေရန်သာသနာစောင့်နတ်မင်းများအား စောင့်ကြပ်စေခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာပြည်ရှိရဟန်းရှင်လူများ မထိခိုက်မပျက်စီးစေရန်တိုင်းနယ်များရှိမြို့ကြီးများသို့ မိမိအားစေလွှတ်၍ အစီအမံများကို ဆောင်ရွက်ခိုင်းကြောင်းမိမိလုပ်ဆောင်သည့်နေရာမြို့များမှ မြေထက်သို့(၄)မိုင် မြေပေါ်သို့ဗဟိုချက်မှ (၃၉၀)မိုင် အန္တရာယ်ကင်းသက်ရောက်စေပါကြောင်း။ မြန်မာပြည်ကြီးအန္တရာယ်မှကင်းဝေးစေရန် ဆရာတော်၊သံဃာတော်များမှ မြန်မာနိုင်ငံနယ်နမိတ်တစ်လျှောက် လေယာဉ်ဖြင့် ပဋ္ဌာန်း၊ပရိတ်၊မေတ္တာများ ရွတ်ဖတ်သရဇယ်ပါက ၂ဝ ပုံ ၁ပုံခန့် သာ အန္တရာယ်ကျရောက်စေမှာဖြစ်သည့်အတွက် ဆရာတော်ဘုရားအားလျှောက်ထားပါကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ဧပြီလတွင် မြောင်းမြ၊ ပုသိမ်၊ဖျာပုံစသည့်မြို့များမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ရေကြိးနိုင်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခု ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မတ်လအထိ ကာလသည်အလွန်အရေးကြီးပါကြောင်း၊ နေနှင့်ကမ္ဘာကြားသု့ိ ဂြိုဟ်ကြီးတစ်လုံးဖြတ်သန်းမှာဖြစ်ပါကြောင်း ၊၎င်းဂြိုဟ်သည်အပူရှိန်ပြင်းထန်လွန်းသောကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည်ငလျင်လှုပ်၊မီးတောင်များပေါက်ကွဲပြီး ပြင်းထန်သောဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသန်းပေါင်း(၆၀၀၀)အနက် သန်း(၃၀၀၀)ကျော်(၄၀၀၀)ခန့်သေကြေပျက်စီးမှာဖြစ်ကြောင်း၊ဤကာလတွင်လူများ သီလသမာဓိတည်ဆောက်ပြီး သတ်သတ်လွတ်စားလျှင်ပိုမိုသင့်လျော်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊မြန်မာ၊သီရီလင်္ကာ၊ နီပေါ၊ယိုးဒယား စသည်(၄)နိုင်ငံသာသက်သာရာရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တပည့်တော် ပုသိမ်၌လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေစဉ်ဦးအောင်မြင့်ဆိုသူ လူတစ်ဥိးရောက်ရှိလာပြီး ဘိုးတော်အောင်မင်းခေါင်မှ၎င်းအား မြစိမ်းရောက်ဆရာတော်ဘုရားသို့ လျှောက်ထားရန်ခိုင်းပါကြောင်း၊မြစိမ်းတောင်ရှိ အဆောက်အဦးများခိုင်ခန့်စွာ တည်ဆောက်ထားရန်ဆန်ဆီဆားဆေး များစုဆောင်းထားရန် လျှောက်ထားခိုင်းကြောင်း။ ယခုသူမလာခင်တပည့်တော်မှ ကြိုတင်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၃ ခု ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၄၊၁၅၊၁၆ ရက်များမှာ ကမ္ဘာကြီးသည်လည်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းပြီး အမှောင်ကျမည်ဖြစ်ပါကြောင်းစသည်ဖြင့်လျှောက်ထားပါသည်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှ ဒကာကြီး လျှောက်ထားချက်များဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းပြန်လည်မိန့်ကြားပါသည်။ ဒကာကြီးလည်း တောင်ပေါ်သို့လှည့်လည်ပြီးအဆောက်အဦးများ ဆောက်ထားသည်ကို လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ရန်နှင့် ဆန်၊ဆီ၊ဆေး၊ဆားစသည်များ အဆင်သင့် ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း ပြန်လည်မိန့်ကြားပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးမှ ဆက်လက်၍ ယခု မြန်မာသက္ကရာဇ်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲသိလားဟု မေးသည့်အခါ ၁၃၇၂ ခုရှိပါပြီဘုရားလို့ဖြေတဲ့အခါဒကာတို့ကို တဘောင်တစ်ခု ရွတ်ပြမယ်၊ ၈၁ နဲ့ မတင်းတိမ် ၉ဝ ခုကိုအရောက်ချိန် မင်းတို့သိကြသလားမေးပြီး နောင် (၁၀)နှစ်နဲ့ နှစ်(၂၀)ကြာရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကုန်ပြီးမန္တလေးမြို့အောင်ပင်လယ်ကန်အနီးမှာ ဗုဒ္ဓရာဇာ၊ဗုဒ္ဓစင်္ကြမင်း ပေါ်လာပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာ မင်းတစ်ပါးတည်းသာ အုပ်ချုပ်စိုးစံမှာဖြစ်တယ်လို့မိန့်ကြားပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ယခုလာရောက်လျှောက်ထားသူ ဦးဝင်းမောင်မှာ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ် မတိုက်ခတ်မီ ၁ဝ ရက်ခန့်အလိုတွင် ဆရာတော်အားရန်ကုန်၊ဧရာဝတီ စသည့်နေရာများတွင် ကြီးမားသော မုန်တိုင်းကြီးတိုက်ခတ်ပြီးလူသိန်းချီသေဆုံးမည်အကြောင်း လျှောက်ထားခဲ့ဖူးသည်။ ၁-၃-၂၀၁၁ ခု အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၈းဝဝ နာရီအချိန် ဦးဝင်းမောင် မှမိုးဇလပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင် သုံးသပ်ချက်အား ဆက်ကပ်ရာ ဆရာတော်မှ ၂၀၁၂ခုနှစ်သည် အင်မတန်မှ အရေးကြီးကြောင်း၊ ပျက်စီးမှာဖြစ်ကြောင်းမိန့်ကြားသဖြင့် လူအများ ကပ်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကိုလျှောက်ထားရာ အန္တရာယ်ဖြစ်ပွါးနိုင်သည့်ရက်များ တွင်ဖယောင်းတိုင်အသေး(၂)တိုင်အား ပူးထွန်း၍ ဘုရား၌ ပူဇော်ပါသားတော်၊သမီးတော်များ အား ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ပါရန်နှင့်သဗ္ဗုဗဒ္ဓေဂါထာတော်အား အချိန်ရလျှင် ရသလို ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ရန်မိန့်ကြားပါသည်။ (ဟုတ်မဟုတ်အား ကိုယ်တိုင် ကြုံကြားသိမြင်ခြင်းမရှိပါလက်ထဲရောက်လာ၍ ထပ်မံဝေငှပါသည်။ဘုရားတရားသံဃာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရန်တိုက်တွန်းချက်များပါ၍ အကျိုးမယုတ်ဟု ယူဆမိပါ၍ ဝေငှခြင်းဖြစ်ပါသည်။) ဖော်ဝပ် အီးမေးလ်မှ…..
ကမ္ဘာက အဲသလိုဟာတွေကြောင့်ပျက်ဘို့ထက် လူတွေဖျက်လို့ ပျက်ဘို့က ပိုများပါတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ဒီအကြောင်းက သိတဲ့လူကလည်းသိပေမယ့်
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေက တစ်ကျပ်ရတစ်ကျပ် ငါးမူးရငါးမူး
နေဦး ကော်နက်ရှင်ကျနေတာလား .. သုံးရင်းတန်းလန်းဘာလို့ မရတော့တာလဲ … ဓါတ်ပုံလည်းတင်လို့မရဘူး … ???
အများကြီး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အခုပဲကြည့် ဘင်လာဒင်ကို အသေဖမ်းမိသွားပြီ။ အရင်က ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ ထင်ထားတာတွေ ရုတ်ချည်းဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘင်လာဒင်ကိုတိုင် မမျှော်လင့်ထားလို့ ဘာမှမခုခံနိုင်လိုက်ပါဘူး။ ရွာသားများလည်း ကမာ္ဘပျက်တဲ့အခါ သူ့လိုပဲ ဘလိုင်းကြီး မခံလိုက်ရလေအောင် ပြင်ဆင်သင့်တာတွေ ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါပြီ။
၁ – ကမာ္ဘပျက်မဲ့သတင်းကို လူတွေပိုသိအောင် လှုံ့ဆော်ပေးကြပါ။
၂ – စားနပ်ရိက္ခာများ ကြိုတင်စုဆောင်းထားပါ။
၃ – မိမိအသက်လောက် ဘယ်အရာမှ အရေးမကြီးလို့ သေခြင်းတရားကိုပဲ ရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ကြပါ။
၄ – ကမာ္ဘပျက်မှာ မဟုတ်ဆိုသူတွေဟာ ဘီလူးသရဲအစီးခံရသူများဖြစ်လို့ အနားလာရင် ပရိတ်ရေနဲ့ပက် မောင်းထုတ်ပါ။
လက်စသပ်တော့ ကိုကြောင်ကြီး နဲ့အတိတ်အနာဂါတ် ဂိုဏ်းသားတွေရဲ့လက်ချက်ကိုး။
ဘယ် Offset မှာ ရိုက်တာလဲ ?
အလို တပ်၇ရစစ်သားပါလား..ရှေ့တန်းထွက်နေရလို့ ရွာထဲမလာနိုင်ဘူးမှတ်တယ်။ ခင်ဗျားကို နောက်တန်းစစ်ရုံးချုပ်မှာထိုင်တဲ့ စစ်သားမှတ်လို့ အထင်ကြီးနေတာ တကယ်တော့ ငတ်တလှည့်ပြတ်တလှည့် ရှေ့တန်းထွက်နေရတဲ့ ကလချာစစ်သားကိုး။ ခင်ဗျားအခုလို ကြပ်ကြပ်စော်ကား၊ ဘယ်တော့မှနောက်တန်း အထိုင်တပ်ကို မရောက်ဘူးမှတ်။ နောင်တရပြီဆိုရင်တော့ ဦးဝင်းမောင်စာကို လူအယောက်တထောင်တိတိကို ဖြန့်ပါ။ အသိတရားရသွားတဲ့ ရုပ်ဝါဒီစစ်သားတယောက် ပြောတဲအတိုင်းလုပ်လိုက်တာ မင်္ဂလာဒုံစစ်ဆေးရုံကြီးကို နောက်တနေ့ ရောက်သွားတယ်။ ကံကောင်းပါစေ….
ခက်တယ်…… ရပ်ကွက် ထဲမှာလည်း ဒီစာမျိုးတွေရောက်နေပြီး….
ရတဲ့လူကလဲ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ဒါကို မိတ္တူ ကူပြီးဆောင်ထားကြတဲ့….
စာထဲက ဝင်းမောင် ဆိုတဲ့ ငနဲ က ဘာလုပ်ပေးမှာမို့လည်း………
ဒီလို အသိ ဉာဏ် မရှိလို့လဲ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရနေတာပေါ့ဗျာ……
သာမည ဆရာတော် အိပ်မက်တွေတော့ ခါတော်မီ ပေါ်လာပြန်ပြီ ကမာ္ဘက ပျက်မှာလည်း မဟုတ်ဘူး ပျက်ရင်လည်း အစားအစာတွေ ဘယ်လောက်စုဆောင်းနိုင်မှာလဲ လူတွေဒီလောက်သေမှတော့ ကိုယ်လဲပါနိုင်တယ် ပတ်ဝန်းကျင်လည်း ပျက်စီးပြီ ဘာတွေ စိုက်ပျိုးကြမှာလည်း စုဆောင်းထားရင် ပျက်စီးတဲ့အထဲမပါနိုင်တော့ဘူးပေါ့ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် မစဉ်းစားဘူး ကုန်ဈေးနှုန်းတက်အောင် လုပ်နေတယ် ၂၀၀ဝ ခုနှစ်ကလဲ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ ခုပဲ ကမာ္ဘပျက်တော့မလို Y2K ပြဿနာထဲ ဆွဲထည့်လိုက်ကြသေးတယ် နောက်ဆုံးတော့ ဘာမှလဲမဟုတ် သေချာလည်း စဉ်းစားကြပါဦး ကောင်းမှုလုပ်တာ ကောင်းပေမယ့် မျက်စိမှိတ်ပြီး ဘာကိုမှတော့ မယုံနိုင်ဘူး ဖယောင်းတိုင်ထွန်း တရားစာရွတ်လို့မှ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆို တစ်ကမာ္ဘလုံး ဖယောင်းတိုင်စက်တွေ သူဌေးဖြစ်ပြီး တရားသင်တန်းတွေ ဖွင့်စားရင်တော့ အိတ်ထဲပိုက်ဆံ သဲ့ယူနေယုံပဲ ချင့်လဲ ယုံကြပါဦး
ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူအဆအရတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူ သာသနာနှစ်က၂၅၀ဝ ဘဲရိုသေးတယ် နောက်ထပ် ၂၅၀ဝ ကျန်သေတယ်လေ
ပြောပြဦးမယ် မနေ့က ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်တာကို မနေ့က ဒီလကို မတ် လပဲထင်နေတာ အမှန်တစ်ကယ်တော့ မေ လဖြစ်နေတယ် ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး တစ်ခါတစ်လေ အဲ့လိုပဲ လ တွေ နှစ်တွေ မေ့မေ့နေတယ် …
လူသားသန်းပေါင်းခြောက်ထောင်ထဲက လေးထောင်ပဲသေကြေ ပျက်စီးမှာဆိုတော့ ဘာပဲပြောပြောလူသားသန်းပေါင်းနှစ်ထောင်တော့ ကျန်ဦးမှာပဲ..။ ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော … ဘယ်လိုပဲပြောပြော
ဒို့ရွာလေးကျန်နေသေးရင် ပြီးတာပဲ…။ နော်…..သူကြီး…းးးး သူကြီး သက်တော် ရာကျော်ရှည်ပါစေ………..
ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လား
ကျွန်တော်ကတော့ မယုံဘူးလို့လည်း မပြောသလို ယုံတယ်လို့လည်း ခေါင်းညိတ်လက်မခံခဲ့ပါဘူး
ဖြစ်မယ် ပျက်မယ်ပေါ့ (ကံဆိုးခဲ့ရင်လည်း ဝဋ်ကြွေးပါလာလို့ပဲပေါ့)
ကမာ္ဘကတော့ဒီနှစ်၂ဝ အတွင်းမှာဘယ်လိုမှမပျက်နိုင်ပါ၊ ကပ်ဘေးတွေကတော့ကျရောက်နိုင်ပါတယ်၊ ဒီဘေးတွေကိုတော့ စင်ကြယ်တဲ့သီလရှိသူတွေကျော်လွှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက်မှာ ဟိုး…. လပေါင်းများစွာကဟာ ခုမှဘယ်သူကတွေ့သွားပြီး
……ကမ္ဘာပေါ်၌ ငလျင်လှုပ်ခတ်ခြင်း၊ မီးတောင်များ ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် ပြင်း ထန်သောသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် များဖြစ်ပွားကာ……
အခုတော့ ငလျှင်တွေလည်း အကြီးအကျယ်လှုပ်နေပြီ ။ အာရှတိုက်ဟာလည်း စစ် ဖြစ်နိုင်ခြေများနေပြီ။ ဒီသတင်း တင်ပေးတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
…….ထွက်ရပ်ဂေါက်…ခပ်ကြောင်ကြောင်လူတွေက.. နာမယ်ကြီး..လူနာမယ်..ဘုန်းကြီးနာမယ်သုံးပြီးလုပ်တယ် ပြောကြတယ်..။…